Xiddigta Pleiades: astaamaha, u fiirsashada iyo quraafaadka | Saadaasha Shabakadda
Maanta waxaan diiradda saareynaa adduunka xiddigiska si aan u sharaxno koox caan ah oo xiddigo ah oo u heellan dhulkeenna. Waxay ku saabsan tahay isweydiin. Waa koox xiddigo furan oo ku dhow meeraha Dunida waxaana loo yaqaan '7 Cosmic Sisters' waana nin Hispanic ka hor yaqaan oo loo yaqaan toddobada whitecaps. Waa cadaalad fududahay inla aqoonsado kutub furan cirka habeenka maadaama uu aad ugu dhowyahay Dhulka. Waxaa laga arki karaa woqooyiga woqooyi ee xiddigta Taurus fogaan ahaan qiyaastii 450 sano oo iftiin ah.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan astaamaha, asal ahaan iyo quraafaadyada 'Pleiades'.
2 Khuraafaadka loo yaqaan 'Pleiades'
3 U fiirsashada Daaroodyada
4 Barashada kormeerka
Waa koox xiddig da 'yar ah tan iyo markii ay xiddiguhu kaliya jiraan 20 milyan oo sano. Qeybta furan waxaan ka heli karnaa kudhowaad 500-1000 xiddigood oo leh dabeecado kulul oo nooc B ah dhammaantoodna waxay ku yaalliin xiddigta Taurus. Waxaan ku sifeyneynaa noocyada ugu waaweyn ee xiddigaha aan ka heli karno salaaxida iyo dhalaalkooda:
Alcyone: Waa xiddigta ugu iftiinka badan dhammaan kuwa leh 'Pleiades' waxayna ku taal masaafo qiyaastii 440 sano oo iftiin ah dhulkeenna. Baaxaddiisa muuqata waa +2.85 waana xiddig ku dhow 1000 jeer ka iftiin badan qorraxda, iyadoo qiyaastii 10 jeer ka weyn.
Atlas: waa xiddigga labaad ee ugu ifka badan kutlada loo yaqaan 'Pleiades cluster' wuxuuna ku yaal fogaan ah 440 sano oo iftiin ah, sida Alcyone. Waxay leedahay baaxad muuqata +3.62.
Electra: Waa xiddigta saddexaad haddii aan ku dalbanno heer iftiin leh waxayna sidoo kale ku taal isla masaafadaas iyo labada kale. Baaxaddeeda muuqata waa +3.72.
Maia: waa mid ka mid ah xiddigaha leh midab buluug-cadaan ah waxayna ku taal meel fogaan ah qiyaastii 440 sano oo iftiin leh cabirkeeduna yahay +3.87.
Merope: Sida loo iftiimiyo waa tii shanaad oo waa xiddig hoosaad leh oo leh midab buluug-cadaan ah oo bayaankiisu u muuqdo +4.14, oo ku yaal in ka badan ama ka yar isla masaafada u dhexeysa inta kale.
Taygeta: waa xiddig laba-geesle ah oo caddadkeedu dhan yahay +4.29 oo xoogaa ugu dhow nidaamka qorraxda, isagoo u jira masaafo dhan 422 sano oo iftiin ah.
Pleione: waa xiddig masaafo ahaan lamid ah kuwa kale oo qiyaastii 190 jeer ka iftiin badan qorraxda. Waxay leedahay gacan gacan 3.2 jeer ka weyn xawaaraha wareegiisuna qiyaastii 100 jeer ayuu ka dheereeyaa qorraxda.
Celaeno: Waa xiddig laba geesoodle ah oo midab buluug-cadaan leh leh. Baaxaddiisa muuqata waa +5.45 waxayna ku taal fogaan ah 440 sano oo iftiin ah.
Khuraafaadka loo yaqaan 'Pleiades'
Sidaad filan karto, inta badan xiddigaha cirka ee samada waxay leeyihiin quraafaadkooda. Waxaa jira khuraafaadyo kala duwan oo ku saabsan Pleiades oo ka hadlaya jiritaankooda hawada sare. Mid ka mid ah sheekooyinkan hal-ku-dhigga ah waa halka ay Pleiades uga dhigan tahay qoolleyda toddobada gabdhood ee walaalaha ahna waxaa lagu sheegay inay yihiin fikradaha oceanid Pleione iyo Atlas. Gabdhaha walaalaha ah waxay ahaayeen Maya, Electra, Taigete, Asterope, Merope, Alcíone iyo Celaeno, waxaa loo badalay xidigo ilaahay Zeus, sidii looga ilaalin lahaa Orion-kii iyaga eryanayayXitaa waxaa la dhahaa ilaa maanta Orion waxay ceyrsaneysaa gabdhaha walaalaha ah cirka habeenkii.
Halyeeyada ayaa sidoo kale leh in ilaahyo kala duwan oo Olympian ah sida Zeus, Poseidon iyo Ares ay ku sasabeen soo jiidashada walaalahaa isla markaana ay uga baxeen midhihii xiriirka. Maya, wuxuu wiil u lahaa Zeus, waxayna u bixiyeen magaca Hermes, Celeno wuxuu lahaa Lico, Nicteo iyo Eufemo oo ay weheliyaan Poseidon, Alcíone sidoo kale wuxuu wiil u siiyay Poseidon, oo ay u bixiyeen Hirieo, Electra wuxuu lahaa laba wiil oo Zeus ah oo uu u yaqaan Dárdano iyo Yasión, Sterope wuxuu dhalay Oenomaus Ares, Táigete wuxuu lahaa Lacedemon Zeus; ahaanshaha kaliya Merope oo ah midda kaliya ee walaalihii Pleiadian ee aan ilaalin xiriirka ilaahyadaTaas bedelkeeda, wuxuu kaliya xiriir la lahaa qof dhimanaya, Sisyphus.
Qayb kale oo ka mid ah quraafaadka ayaa sheegeysa in walaalaha Pleiadian-ka ay go'aansadeen inay naftooda dilaan maadaama ay aad u dareemeen niyad jab aad u badan oo ku dhacay wax walba oo ku dhacay aabbahood Atlas iyo luminta Walaashood Hyades. Markuu isdilayo, Zeus wuxuu go'aansaday inuu iyaga siiyo waarin iyo Wuxuu iyaga dhigay samada si uu ugu beddelo xiddigo. Sidaa awgeed quraafaadkan koox-kooxeedyada cirka ayaa ku dhashay.
U fiirsashada Daaroodyada
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, Pleiades aad ayey ugu dhowdahay meeraheenna, sidaa darteed waa wax aad u fudud in cirka laga arko. Waa koox loo tixgeliyey xiddigo leh meel sahlan. Xiddigihiisa waaweyn ayaa ka ifaya oo si fudud loo arki karaa. Waa inaad tixgelisaa tixraaca si aad uhesho koox-kooxeedka waana inaad isticmaasho hagaha xiddigta Taurus sidaa darteed qirashaduhu way fududahay in la aqoonsado, maadaama ay gudaha ku jirto.
Badanaa 6 xiddig kaliya ayaa lagu aqoonsan karaa isha qaawan, laakiin haddii habeenku cad yahay, inbadan ayaa la ogaan karaa. Si aad si fiican ugu hesho Pleiades, waxaad u isticmaali kartaa Orion hage kale. Waa mid ka mid ah xiddigaha ugu caansan waxayna u adeegtaa jihayn si ay u gaarto kooxdan xiddigaha ah. Waxay ku yaalliin korka Orion, iyagoo ka tallaabaya xiddigta Taurus waana koox xidigo buluug ah leh.
Qaybta ugu quruxda badan ee xiddigaha loo yaqaan barta ugu sarreysa ee aad joogto inta lagu jiro bisha Nofembar. Waa goorta sida ugu quruxda badan loo arki karo. Haddii lagu eego teleskop-ka xirfadlaha ah waxaa si cad loogu kala sooci karaa inay ku hareeraysan yihiin waxyaabo leh midab buluug ah taas oo iftiinka xiddiguhu ka muuqdo kuna wareegsan yihiin nebula.
Kooxdan xiddiguhu waa mid xiiso gaar ah u leh barashada cilmiga xiddigiska casriga ah, waana sababta maanta ay weli qayb uga yihiin baadhitaannada xiddigiska ee ku meeraysan cimriga nolosha iyo mustaqbalka xiddigahan quruxda badan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto waxa loo yaqaan 'Pleiades' iyo waxa astaamahoodu yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Pleiades